Ngesikhathi umcabango sokuphulukiswa imithombo yamanzi amtoti, thina ngokushesha ukwethula ezinye Baden-Baden, nalapho imisebenzi eminingi yobuciko. Ngokuvamile ngokushesha ngemuva ngale ndlela kufanele umeluleki wethu wezimali, okuyinto okusikhumbuza ukuthi travel phesheya, asinakukwazi. Kodwa ungalilahli ithemba, kungcono izaba esihle sokubheka bebheke zokungcebeleka yasekhaya.
Vakashela wonke umndeni elise edolobheni umthombo Yar
kwabavakashayo yayo impilo Tyumen yaziwa kubo bonke izakhamuzi esise-Ural, East eSiberia. Abaningi babo baye ungazisoli yokuthi eCzech Republic nge Spas yayo okunzima ukufinyelela. Kurgan, Novosibirsk, eYekaterinburg futhi Chelyabinsk lapha izinkulungwane ashisayo zokugeza abathandi beze njalo ngonyaka.
Kutholwe edolobhaneni Yar Spring hot. Tyumen amakhilomitha amabili nje kude. Lena indawo enhle uma undemanding kusevisi futhi akafuni ngokuvumelana nezindinganiso ze-European, futhi nje ufuna impilo yakho ngaphandle kokuyekethisa isabelomali.
Leli dolobhana kuyinto ngakwesokudla bangaziqhayisa hhayi kuphela umthombo, kodwa futhi ubukhulu bawo. Pool ephulukisa amanzi ihlanganisa indawo ka-25 ebagagula 35 amamitha. Kuyinto umthombo ngobukhulu kulesi sifunda. Amanzi equkethe namaminerali amaningi, njenge-boron, i-iodine uxhumano lokudlulisa, i-methane nezinye kompnenty begazi, amanga ngesikhathi 2.5 km ukujula futhi sekuqala ukufudumala kuya 42 degrees. inkonzo eza abasebenzi amandla bathi kungabuye zithathwe ngomlomo.
Ukuze amanzi labo umcengezi ikakhulukazi babonakala esishisayo ngokweqile, kukhona inikezwa ithangi okwengeziwe lapho kwehlukana eziningana yehlisa izinga lokushisa.
Ngemva kwemukelwa zokugeza ukuphulukiswa - odokotela batusa hhayi ningi than session yemizuzu engu-20 - kungenziwa engahashazanga e eshaweni cool. Warm sigqoka amakamelo anemisila heater lefoni, njengoba abaningi ekubeni edolobhaneni Yar Umthombo (Tumen) ebusika. Ikakhulukazi ziphoqa umthombo ngesikhathi imikhosi Epiphany. Laba bantu zenkolo zithuthelekela ezindaweni eziningi zaseRussia.
Amarekhodi Ezokwelapha ukuze isetshenziswe ezishisayo
Sekuyisikhathi eside ososayensi kungase kutholakale ukuthi iziphethu babe ukuphulukiswa nomthelela emzimbeni iyonke. Ukwamukelwa okugeza ezishisayo ngesivinini cell umzimba kuthuthukisa umzimba. Babuye ikakhulukazi wabonisa izifo wokugaya ukudla, Isimiso senhliziyo nemithambo yegazi, izifo zesikhumba, uhlelo zemisipha. Siza amanzi nabantu high blood pressure. Kufanele kuthathwe izinyathelo ukuze lezo zinqubo kulabo abaphethwe umdlavuza nesifo sofuba, noma has izinkinga igazi. Nokho, noma kunjalo, kufanele uxhumane nodokotela wakho ngaphambi kokuba uvakashela kuyinto edolobhaneni umthombo Yar. Tyumen izimemo enempilo bonke abakhotheme ephulukisa amanzi bayozuza.
Wonke umkhaya angaya okungenani usuku olulodwa e Yar (Spring hot). Tyumen - edolobheni elikhulu, lakhiwa kahle amasevisi zokuthutha. Ngisho noma ungenayo ufike esikhumulweni imoto yakhe, endaweni ke engafinyelelwa kusukela enkabeni yedolobha ngebhasi noma ngetekisi.
Letha incwadi kudlule isikhathi sokungcebeleka, uma uzobe abazozivakatjhela iziphethu ezishisayo (Yar, Tyumen). Izibuyekezo bebelokhu lapha bathi akukho izinhlelo ukuzijabulisa namasiko kungukuthi kunikeziwe. Nokho, kukhona impela cafe ehloniphekile, lapho bangakwazi ingcosana njengoba ephilayo, futhi izivakashi.
Ufuna ezishibhile ukuba aphumule kuyo? Vakashela umthombo (Yar, Tyumen)!
Amanani ukusetshenziswa amanzi ashisayo wamangaza uhlamvu entandweni yeningi. Imali yokungena uzokhokhiswa ruble 190, ngisho nezingane kanye nabahola impesheni, kanye Isaphulelo sokuthola ulwazi samukeliwe. Uma ukhetha ukuba ahlale izinsuku ezimbalwa, imali yokuqasha yakhuphuka yaba indlu izobiza ruble 1500. sipho Kunenzuzo, ikakhulukazi uma uza inkampani encane. amakhaya Okuningi ivulekile nibaluleke 3300 ruble ngosuku, noma ruble 250 ngehora.
Inketho kangcono iholidi - ukuya ngubani edolobhaneni umthombo Yar. Tyumen - edolobheni elikhulu elinomlando ezithakazelisa kakhulu, ungase futhi ahlele izinhlelo kwamasiko zokungcebeleka ngaphezu. Lolu hambo esiyozuzisa wena nezingane zakho. Ngisho noma kungekho isifo ungenayo ukufinyelela amandla ezishisayo kuyoba nethonya okuvuselela futhi tonic, ukuthuthukisa isimiso somzimba sokuzivikela futhi sithuthukise isimo semizwa yakho.
Amphibians - zidalwa ezimangalisayo. Amaqiniso ethakazelisayo izilwane zasemhlabeni
Pine uMethusela ubudala, indawo, amaqiniso athakazelisayo
Ukusebenzisa okhilimu, banake imigca ukubhucunga ubuso
Miracle Cure - umhluzi chamomile
Indlela yokutshala Chrysanthemums e bamphathele nezimbali? incazelo
Cruise umkhumbi ngempelasonto kusukela eMoscow. isikebhe uhambo
Unquma ukuthenga mini-TV
Folk ephulukisa izilonda we duodenum.
Cafe "Mafia" (Perm): incazelo, ukulethwa
Ukudweba imifanekiso emzimbeni amashiya. Yeka ukuthi kuyinto ubuhle?
Imbuzi zaseHimalaya: incazelo, ukusatshalaliswa, ukukhiqizwa kabusha